Fanambarana maika momba ny fiparitahan'ny COVID Variant Omicron ny minisitry ny fahasalamana Canada
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Fanambarana maika momba ny fiparitahan'ny COVID Variant Omicron ny minisitry ny fahasalamana Canada
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Minisitry ny fahasalamana kanadiana Jean-Yves Duclo
Ny minisitry ny fahasalamana kanadiana Jean-Yves Duclos dia nanao fanambarana lehibe momba ny fiparitahan'ny karazany vaovao COVID Omicron any Canada.
Ny governemanta Kanadiana dia manohy manao hetsika tsy mbola nisy toa azy sy tapa-kevitra mba hiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny Kanadiana. Ny fepetra androany, anisan'izany ny fepetra vaovao ho an'ny fitsapana mialoha ny fiaingana any amin'ny firenena fahatelo ho an'ireo mpandeha tonga any Canada avy any amin'ny firenena sasany any amin'ny faritra atsimon'i Afrika, dia napetraka mba hisorohana ny karazany vaovao amin'ny viriosy COVID-19 tsy hampiditra sy hiparitaka any Canada.
Ny minisitry ny fahasalamana Kanadiana Honorable Jean-Yves Duclos dia namoaka ity fanambarana manan-danja ity ho an'ny vahoaka Kanadiana.
Nampahafantarin'ny masoivoho momba ny fahasalamam-bahoaka any Canada aho androany fa ny fitiliana sy ny fanaraha-maso ny raharaha COVID-19 dia nanamafy tranga roa momba ny variana Omicron ahiahiana any Ontario, Canada.
Ity fivoarana ity dia mampiseho fa miasa ny rafitra fanaraha-maso.
Niresaka tamin'ny mpiara-miasa amin'ny faritany any Ontario aho izay miasa any amin'ny faritany sy eo an-toerana ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka mba hifandray sy hanadihady ireo tranga.
Raha mitohy ny fanaraha-maso sy ny fitiliana amin'ny faritany sy faritany, dia antenaina fa hisy tranga hafa amin'ity variana ity ho hita any Canada.
Fantatro fa toa mampiahiahy ity variana vaovao ity, saingy tiako ny mampahatsiahy ny Kanadiana fa ny vaksiny, miaraka amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fepetra fiarovana ho an'ny tsirairay, dia miasa mba hampihenana ny fihanaky ny COVID-19 sy ny karazany ao amin'ny vondrom-piarahamoninay.
Tamin'ny 26 Novambra, ho setrin'ny ahiahy momba ny variana amin'ny Omicron, dia nanambara aho fa ny Governemanta Canada dia nampihatra fepetra nohatsaraina sisintany ho an'ireo mpandeha rehetra izay tany amin'ny faritra atsimon'i Afrika — anisan'izany i Afrika Atsimo, Eswatini, Lesotho, Botswana, Zimbaboe, Mozambika, ary Namibia— tao anatin'ny 14 andro farany talohan'ny nahatongavany tany Kanada, hatramin'ny 31 Janoary 2022.
Ireo fepetra momba ny sisintany ireo dia ampiharina raha ny Kanadiana sy ny eran-tany ara-pitsaboana, ny fahasalamam-bahoaka ary ny vondrom-pikarohana dia manombatombana tsara an'io variana io - toy ny efa natao tamin'ny karazany teo aloha - mba hahatakarana bebe kokoa ny mety ho fiantraikany eo amin'ny fifindran'ny aretina, ny fampisehoana klinika ary ny fahombiazan'ny vaksiny.
Nanamafy ny tompon'andraikitra momba ny fahasalamam-bahoaka any Afrika Atsimo fa misy karazana ahiahy COVID-19 vaovao (B.1.1.529) hita ao amin'io firenena io. Tao anatin'ny 24 ora lasa izay, ity variana ity - antsoina hoe Omicron avy amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana - dia hita any amin'ny firenena hafa koa.
Hatramin'ny niandohan'ny areti-mifindra, ny Governemanta Canada dia nametraka fepetra teo amin'ny sisin-tanintsika mba hampihenana ny loza ateraky ny fanafarana sy fifindran'ny COVID-19 sy ny karazany any Canada mifandraika amin'ny dia iraisam-pirenena. Androany, ny minisitry ny Fitaterana, Omar Alghabra, ary ny Minisitry ny Fahasalamana, Jean-Yves Duclos, dia nanambara fepetra vaovao momba ny sisintany hiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny Kanadiana.
Olom-pirenena kanadiana, mponina raikitra ary olona manana sata eo ambanin'ny Lalàna indiana, na inona na inona sata fanaovana vaksiny azy ireo na efa nanana tantaram-panadinana tsara ho an'ny COVID-19 teo aloha, izay efa tany amin'ireo firenena ireo tao anatin'ny 14 andro teo aloha dia iharan'ny fitsapana, fitiliana ary fepetra fanagadrana.
Ireo olona ireo dia takiana hahazo, ao anatin'ny 72 ora miala, fitsapana molekiola COVID-19 ratsy manan-kery any amin'ny firenena fahatelo alohan'ny hanohizana ny diany any Canada. Rehefa tonga any Canada, na inona na inona sata vaksiny na efa nisy tantaram-panadinana tsara ho an'ny COVID-19 teo aloha, dia iharan'ny fitsapana tonga avy hatrany izy ireo. Ny mpandeha rehetra avy any amin'ireo firenena voatanisa dia takiana amin'ny fanaovana fitiliana amin'ny andro faha-8 aorian'ny fahatongavana sy ny confinement mandritra ny 14 andro.
Ireo mpandeha rehetra avy any amin'ny firenena voakasik'izany dia halefa any amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Public Health Agency of Canada (PHAC) mba hahazoana antoka fa manana drafitry ny confinement izy ireo. Ireo tonga amin'ny alàlan'ny fiaramanidina dia tsy maintsy mijanona ao amin'ny toeram-pisakafoanana voatondro eo am-piandrasana ny valin'ny fitsapana fahatongavany. Tsy avela handeha izy ireo raha tsy efa nankatoavina ny drafitry ny confinement ary nahazo valim-panadinana ratsy ny fahatongavany.
Hisy ny fanaraha-maso bebe kokoa momba ny drafitry ny confinement ho an'ireo mpandeha avy amin'ireo firenena ireo ary ny fanaraha-maso hentitra mba hahazoana antoka fa manaraka ny fepetran'ny confinement ny mpandeha. Fanampin'izay, ireo mpandeha, na inona na inona sata fanaony amin'ny vaksiny na efa nanana tantaram-pitsapana tsara ho an'ny COVID-19 teo aloha, izay niditra tao Canada avy any amin'ireo firenena ireo tao anatin'ny 14 andro lasa, dia hifandray sy hotarihina hotsapaina sy hanaovana quarantaine eo am-piandrasana azy. vokatry ireo fitsapana ireo. Tsy misy fanavakavahana omena manokana amin'ireo fepetra vaovao ireo.
Manoro hevitra ny Kanadianina ny Governemanta Kanada mba tsy handehandeha any amin'ireo firenena ao amin'ity faritra ity ary hanohy hanara-maso ny zava-misy mba hampahafantarana ny hetsika ankehitriny na ho avy.
Ny Governemanta Canada dia hanohy ny fanombanana ny toe-javatra mivoatra ary hanome fanavaozana aho araka izay ananantsika. ”
Tsy misy sidina mivantana eo anelanelan'i Kanada sy ireo firenena afrikanina atsimo.
Ny Governemanta Canada dia miara-miasa amin'ny faritany sy faritany ary ny Canadian COVID Genomics Network mba hamantarana ireo variana otrikaretina COVID-19 fantatra sy mety hipoitra ao anatin'izany ity variana vaovao avy any Afrika Atsimo ity.
Tamin'ny Febroary 2021, ny Governemanta Kanada dia nampitombo ny fahafahany hitadiavana sy hanara-maso ireo karazana olana any Canada amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola $53 tapitrisa amin'ny tetikady Variants of Concern. Ny Governemanta Canada dia miara-miasa amin'ny faritany sy faritany ary ny Canadian COVID Genomics Network ary ny Canadian Institutes of Health Research momba ny fanaraha-maso, ny filaharana ary ny ezaka siantifika hamantarana ireo karazana otrikaretina COVID-19 fantatra sy mety hipoitra.
Ny United Kingdom, ny Vondrona Eoropeana ary ny Etazonia dia nametraka fameperana mitovy amin'izany mba hanalefahana ny loza ateraky ny fampidirana an'io variana io avy any amin'ny faritra atsimon'i Afrika.
Bebe kokoa momba an'i Jean-Yves Duclos, minisitry ny fahasalamana kanadiana
Ny hajaina Jean-Yves Duclos dia solombavambahoakan'i Québec hatramin'ny taona 2015.
Efa filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Tahirimbolam-panjakana sy minisitry ny Fianakaviana, ny Ankizy ary ny Fampandrosoana ara-tsosialy izy teo aloha.
Ny Minisitra Duclos dia mpanoratra, mpandahateny momba ny fihaonambe ary manampahaizana momba ny toekarena. Talohan'ny taona 2015 dia Talen'ny Departemantan'ny Toekarena izy ary profesora niasa tao amin'ny Université Laval.
Ho fanampin'ny andraikitry ny profesora, ny Minisitra Duclos dia nitazona ny filoha teo aloha Industrial Alliance Research momba ny Economics of Demographic Change (ankehitriny ny Filohan'ny Fikarohana momba ny Toekarena Intergenerational), izay filoha voafidy tao amin'ny Fikambanan'ny Toekarena Kanadiana, ary mpikambana tao amin'ny Institut. sur le vieillissement et la participation sociale des aînés.
Filoha lefitry ny Fondation pour les études et recherches sur le développement international ary mpiara-monina ao amin'ny CD Howe Institute ihany koa izy. Izy koa dia mpiara-manorina ny Tambajotra fikarohana momba ny fahantrana sy ny politika ara-toekarena (Partnership for Policy Economic).
Ny asa mafy nataon'ny Minisitra Duclos dia nekena tamin'ny fanomezan-danja be, anisan'izany ny prix Marcel-Dagenais avy amin'ny Société canadienne de science économique sy ny Loka Harry Johnson ho an'ny taratasy tsara indrindra navoaka tao amin'ny Canadian Journal of Economics. Tao amin'ny 2014, voafidy ho mpiara-miasa amin'ny Royal Society of Canada izy, ny mari-pankasitrahana ambony indrindra nomena ireo mpikaroka kanadiana.
Ny Minisitra Duclos dia nahazo ny Bachelor of Arts in Economics (First-Class Honors) avy amin'ny University of Alberta, ary ny mari-pahaizana maîtrise sy doctorate amin'ny Economics avy amin'ny London School of Economics and Political Science.
SOURCE masoivoho momba ny fahasalamam-bahoaka any Canada